सुन्दर स्त्रीसँग नजिक हुन चाहनु हुन्छ ? यी ५ टिप्स पढ्नुहोस् ! - Naya Pusta
सुन्दर स्त्रीसँग नजिक हुन चाहनु हुन्छ ? यी ५ टिप्स पढ्नुहोस् !
Naya Pusta २०७५ असार २४ July 8, 2018 गते प्रकाशित
एजेन्सी । सुन्दर अनुहार, मिलेको अनुहार र स्मार्ट। साँच्चै भन्नु पर्दा सपनाकी राजकुमारी जस्ती । यदि यस्तै कुनै स्त्री भेट्नु भो भने यसै जान दिनुहुन्छ ? पक्कै दिनु हुन्न होला । पक्कै पनि तपाइँ उनलाई आकर्षित गर्ने कोशिस गर्नु हुन्छ होला । तर जति गर्दा पनि उनलाई आकर्षित गर्न नसकेमा चाँहि पक्कै रिस उठ्छ होला । यहाँ कुनै पनि सुन्दर स्त्रीसँग नजिक हुनका लागि चाहिने ५ कुराको चर्चा गरिएको छ ।
१ आँखामा आँखा राखेर कुरा गर्नुस् हुन त यो कुरा सँधै सुन्नु भएको छ होला । आँखामा आँखा राखेर कुरा गर्नुको प्रभाव निक्कै फरक हुन्छ । यदि तपाइँलाई कस्तो कस्तो लागेको छ भने यता उता आँखा दौडिन्छन् । यसो नगर्नुस् । आँखामा आँखा राखेर कुरा गर्नुस् यसको प्रभाव नाटकीय हुन्छ । तर यसको अर्थ एककोहोरो अनुहारमा घुर्ने भनेको चाँहि होइन ।
२ हाँसी मजाक गर्नुस् हाँसो गर्न जान्ने केटाहरु अधिकाँश केटीलाई मन पर्छ । यसको अर्थ जथाभावी हाँस्ने भनेको होइन । तर समय समयमा विभिन्न तरिकाले हाँसोको विषय निकाल्नु केटामा चाहिने अनिवार्य कला हो ।
३ बडी ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि स्त्रीलाई आफूप्रति आकर्षित गर्नमा मुख्य भूमिका तपाइँको हाउभाउ र भाव भङ्गिमा ले खेल्छ । तपाइँले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नु हुन्छ भन्ने कुराले तपाइँको ब्यक्तित्वप्रति स्त्रीको प्रभाव पर्छ । आत्मविश्वासी र हँसिलो मुद्रामा गरेको कुराकानीको प्रभाव नै फरक हुन्छ ।
४ भन्नुस् र सुन्नुस् पनि कतिपय ब्यक्ति कुनै कुरा भन्नुछ भने एककोहोरो भन्ने र कुरा थपेको थप्यै गर्ने स्वभावका हुन्छन् । तर त्यस्तो गर्दा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । आफ्ना कुरा राखेपछि उनले के भन्छिन् भनेर सँधै विचार गर्नुस् । सके सम्म दिल खोलेर कुरा गर्ने वातावरण बनाउनुस् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सुत्नुअघि तेलले पैतला मालिस गर्नुहोस्, पाउनुहुनेछ यतिधेरै फाइदा
५ मौनता पनि जरुरी कुनै पनि कुरा गरिसकेपछि केही समय मौन रहनुस् । प्रतिक्रिया सुन्नुस् । सके सम्म हाँसी मजाकका साथमा कुरा शेयर गर्नुस् ।
बदलिँदो समयसँगै उपनाउनुहोस् अनुहारको सुन्दरताका लागि यी २० टिप्स
यसरी गर्नुहोस् पुराना सारीको सदुपयोग